FAQs - Shenzhen Youde voafetra nitranga fahiny
Orinasa na ny orinasa ara-barotra?
100% orinasa, manana ny teniko.
Moa ny vidiny mora sy tsara kalitao? MOQ?
Mandra-pahoviana ny firaka fotoana fifadian-kanina?
3-7 andro fiasana ho an'ny nitranga fahiny, 25-30 andro ho an'ny mold.other dia miankina amin'ny ny didy dia be.
Ahoana ny Payment Terms?
Ny tena mahazatra amin'ny teny fandoavam-bola dia: 50% T / T petra-bola, mahay mandanjalanja eo anatrehan'i lahateny. West Union, L / C no nanaiky.
Ve ny manta zavatra mifanaraka amin'ny Rohs?
Eny, fa ny manta zavatra rehetra
Inona no tokony hataoko raha manana fanontaniana hafa?
Ve ianao afaka manoro hevitra antsika fahombiazana entana vahaolana?
Vitantsika izany. Tetikasa rehetra ho fizahana sy nankatoavin'ny ny ekipa alohan'ny filaminana teny nindramina ka hanamarina aminao.
OEM / ODM fanompoana misy?